MP4 iyo regelingen jira laba ka mid ah qaabab file maqal ah ugu caansan in taageero ciyaaryahan music caadi ah. Mararka qaar, waxaa laga yaabaa inaad u baahnayn in loogu badalo MP4 in regelingen ama regelingen in MP4 si ay u helaan ka tayo wanaagsan, cadaadin ku files audio ama kaliya awood aad u ciyaaro aad music on ciyaartoyda audio gaar ah. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa software lagu kalsoonaan karo in si fiican u shaqaynayaan iyo xajisto tayada file maqal ah la badaley. The Wondershare video Converter waa MP4 sarre si Converter regelingen in si degdeg ah ka shaqeeya. Waxaa kaloo loo isticmaali karaa si loogu badalo regelingen in MP4 oo ay la socdaan qaab kale file maqal ah. Maqaalkani waxa uu kugu hagi doona geeddi-socodka ah ee diinta MP4 galay regelingen iyo arima ku qeybsanaan isticmaalaya software this.
Part1: Best MP4 in regelingen (regelingen in MP4) Video Converter
Part2: MP4 Free in regelingen (regelingen in MP4) Video Converter
Part3: MP4 Online in regelingen (regelingen in MP4) Video Converter
Part4: Dooro MP4 in regelingen (regelingen in MP4) Video Converter in aad xaq u leedahay in aad ka u
Part5: Aqoonta Extended u MP4 iyo regelingen qaabab
Wondershare Video Converter Ultimate waa qalab si fiican u yaqaan in uu fududeeyaa ka badalay qaab file iyo qabtaan shaqo oo dhan la arrin fudayd cajiib ah. Waxaa jira qaabab in la kala saaro inta kale oo ka mid ah software iyo qalab loogu talagalay qaab file diinta.
• Beddelaan regelingen in MP4 iyo qaabab kale audio sida MP3, OGG, WMA, AAC, M4A
• Beddelaan MP4 in regelingen iyo qaabab kale audio sida MP3, OGG, WMA, AAC, M4A
• diinta audio Fast. Waraaqda audio oo aan wax khasaaro ah ee tayada
• Beddelaan iyo gubi inay ka shaqeynayaan CD. La shaqee on Windows NT4 oo dusha iyo sidoo kale Mac OS X
1.2 Hab-ee diinta MP4 in regelingen (regelingen in MP4) la Wondershare Video Converter Ultimate
Tallaabada 1 Import ayaa MP4 Or regelingen Files
Si fudud u jiidi oo hoos u MP4 ama regelingen faylasha aad rabto in aad si loogu badalo ku riday Wondershare video Converter kama dambaysta ah. Haddii kale, waxaad sidoo kale riixi kartaa "ayuu ku dari files" badhanka si ay u helaan faylasha aad rabto in aad si loogu badalo. Isticmaal shaqeynta Dufcaddii doorashada si ay u dajiyaan ka badan hal file diinta.
Tallaabada 2 Dooro Qaabka Output (regelingen Or MP4)
Riix "qaab wax soo saarka" button. In uu furmo, xulo qaab la doonayo wax soo saarka (labada MP4 ama regelingen).
Tallaabada 3 Start diinta
Riix badhanka "Beddelaan". Tani badalo doonaa MP4 in regelingen ama regelingen in MP4, iyada oo ku xidhan doorashada. Marka hawlaha qaab beddelidda dhamaato, waxaad ka arki kartaa file saarka adigoo gujinaya "folder aragtida". Waxa kale oo aad ku gubi karaa faylasha diinta CD ama DVD adigoo gujinaya ah "gubi" tab iyo xulashada "gubi".
Haddii aad raadinayso qaar ka mid ah qalab lagu kalsoonaan karo diinta video ah sida, tusaale ahaan, aad rabto in aad si loogu badalo qaab file MP4 regelingen ah ama qeybsanaan markaa waa in aad si fiican u tagaan Wondershare Video Converter Free. Ku saabsan diinta video ah, waa xirmo buuxda in qof kasta oo doonayo for.
Wondershare Video Converter Free sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo MP4 in regelingen iyo regelingen in MP4, marka laga soo tago in badan oo kale laga badalay qaab file
Waa fudud oo degdeg ah in la isticmaalo
Waa bilaash in la isticmaalo iyo si gaar ah u weyn haddii aadan u baahan tahay si loogu badalo files audio inta badan.
Software waxaa taageersan NT4 daaqadaha iyo ka dib daayo daaqadaha.
Waxaa u shaqayn karo kombuyuutar oo ka weyn leh xasuus yar intii 256MB iyo processor xawaare yar intii 750MHz.
Qasaarooyinka: Inkasta oo aan u baahnaan doontaa inaad bixiso wax kasta si loogu badalo aad audio files isticmaalaya version xorta ah ee Wondershare video Converter, tayada files wax soo saarka ma aha waxa ugu fiican. Haddii aad raadineyso weeyna u tayo wanaagsan, eekaan Wondershare Video Converter Ultimate ah.
2.2 diinta MP4 in regelingen (regelingen in MP4) isticmaalaya Wondershare Video Converter Free
Tallaabada 1 Import MP4 ama regelingen files
Ka dib markii software ah, guji "darto files" button on interface ugu weyn ee ay doortaan MP4 ama regelingen ee files si loogu badalo. Waxaad dooran kartaa mid ka mid Ufbaa badan ama faylasha isticmaalaya function doorashada Dufcaddii.
Tallaabada 2 qaab saarka Select
Riix "qaab" wada hadal iyo doortaan labada regelingen ama MP4 sida aad wax soo saarka. Waxa kale oo aad ka itusi lagama maarmaan ka dhigi kara sida ku daray subtitles, lana siii iyo beddelo video iftiinku ku soo saarka marka halkan la gaadho.
Tallaabada 3 badalo
Guji "Beddelaan" in la bilaabo hawlaha qaab beddelidda. Tani waa in ay qaataan labo daqiiqo si uu u dhameystiro ku xiran tahay tirada ka dhigay files aad diinta iyo customizations. Marka diinta ka dhamaato, waxaad si toos ah gubi karaa files si aad u DVD.
Ma doonaysaa in aad hesho ugu fiican video tayada wax soo saarka iyo xawaaraha diinta ugu dhaqsiyaha badan? Video Converter Ultimate Waa aalad qaab beddelidda video ugu kalsoonaan karo oo aad u. Just waxay isku dayaan hoos ku qoran.
Online MP4 in regelingen (regelingen in MP4) Video
MP4 Free in regelingen (regelingen in MP4) Video Converter
Best MP4 in MAV Video Converter
Beddelaan DVD guriga
Beddelaan Video inay qaabab caadi ah
Qaababka caadiga ah oo kaliya Qaababka caadiga ah oo kaliya Qaabab oo dhan ku dhow, in ka badan 150 qaabab
Diinta Dufcaddii of video files
Ugu badnaan size file Upload 100 MB Unlimited Unlimited
Video xawaaraha Conversion Gaabis ah Good Sida dhaqsaha badan Video Conversion in Industry
Tayada Video diinta General Good Tayada sameecadda
Beddelaan wax 2D videos in qaab 3D xawaare ultrafast
Beddelaan HD Video ay ka mid yihiin 4K H.265 / HEVC
Guba video ama maqal ah si DVD qof
Download YouTube Video iyo videos ka goobood oo kale video qaybsiga
Faalladaada hawlaha: clip, Split, Dalag, isku darsamaan, isku beddesha iyo More
Raadka Gaarka ah ee video tafatirka
Huwi ama ka qaad Text Watermark Image /
Bedelka videos in aad Apple iyo qalabka Android via Wi-Fi
Durdurrada files warbaahinta aad PC ah in TV a smart
Taageero DLNA Eebaha dhisay
Description Regelingen waa qaab file maqal ah. Waa Resource waydaartaan heerka Qaabka File ah iyo xogta dukaamada kala burburisay. Regelingen waa qaabka audio ugu weyn ee loo isticmaalo audio isticmaalin on boosteejo Windows ah.
MP4 waa file weel. Waxaa qaban kara noocyada kala duwan ee multimedia oo ay ka mid audio, video iyo weli sawirada.
Guuritaanka Picture Khubarada Group
MIME Type Video Video
Details for regelingen on Wikipedia
Waa Maxay file a regelingen
Sida loo Converter regelingen in MP3 u Google Music
Details for MP4 on Wikipedia
Faraqa u Dhexeeya MP4 iyo regelingen
Waa Maxay MP4 Forma
Sida loo badalo MP4 in MPEG / MPEG-1 / MPEG-2?
Sida loo Beddelaan MP4 in MP4 on Windows iyo Mac?
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in regelingen ama regelingen in MP4?